Common iPhone Mpịakọta Nsogbu na otú ndozi ha
Common iPhone Mpịakọta Nsogbu na Olee idozi ha
E nwere n'ezie a otutu olu nsogbu na i nwere ike na-alụso onye na gị iPhone. Si ala oku olu àgwà niile ụda na ekwentị gị ọdịmma nke ala mma. Ọ bụrụ na ị tara ahụhụ si na otu iPhone olu nsogbu ma ọ bụ ọzọ, ọ bụghị nanị gị. Nsogbu ndị a nwere ọtụtụ nkịtị karịa ị na-eche. Dabara nke ọma n'ihi unu, ọtụtụ n'ime ha nwere ike ofu.
Na mmụọ nke na-enyere gị aka, anyị na-aga lebara ole na ole n'ime nsogbu ndị a na-nyere gị na ihe dị mfe fix maka onye ọ bụla. Mere, oge ọzọ, gị iPhone si olu na-eme elu, na-agbalị otu n'ime ndị a ngwọta.
1. Mgbe oku olu na gị iPhone bụ ala
A ala oku olu nwere ike ịbụ a na-akụda mmụọ nsogbu karịsịa mgbe ị na-agbalị ịghọta onye nke ọzọ na akara na i nwere na-arịọ ha ka ha na-ekpeghachi onwe ha. Ị na-adịghị aka ịtachi obi a ala àgwà olu ọ bụla ogologo. Nanị na-eso nzọụkwụ ndị a na-esi gị olu azụ.
Gaa na ntọala gị na iPhone na mgbe ahụ enweta na General Tab, mgbe ahụ, n'okpuru mbara nhọrọ enweta na Accessibility.
The ikpeazụ nzọụkwụ bụ gwụ ekwentị mkpọtụ akagbuo na a ga-ekwe ekwentị na-eleghara niile interruptions-abịa gị iPhone na mmetụta melite oku olu.
2. Mgbe ndị Music Mpịakọta na gị iPhone bụ kwa oké
Mgbe ị na-apụghị nnọọ chepụta otú gbatuo olu na gị iPhone, ị ga-agbalị a dị mfe ngwọta.
Gaa na Ntọala na ekwentị gị. Pịa na General na mgbe ahụ Accessibility. Ozugbo ebe a pịa "anụ ọrịa AIDS" Tụgharịa na Ịnụ Ihe. Nke a ga-amụba ọkà okwu olu ma n'otu oge gbanyụọ "Phone Noise akagbuo" nke bụ mgbe niile na ndabara.
3. Gịnị ma ọ bụrụ na ị pụghị ịnụ ọ bụla ụda na niile?
A ọtụtụ ndị kọrọ anaghị anụ ọ bụla ụda na ha iPhone. Dabere na ihe ị chọrọ ime, nke a nwere ike ịbụ a nnọọ egwu atụmanya n'ihi na ọtụtụ ọrụ. Nke a iPhone nkịtị nwere ike mere site eziokwu na gị iPhone bụ rapaara na headphone mode. E nwere ọtụtụ ihe mere nke a ji ike ime eme. I nwere ike itinye gị na ekwentị na headphone mode ma chefuo imezi ya. N'agbanyeghị ihe mere, nsogbu adịghị nwere na-akpata ike ọgwụgwụ. A bụ otú idozi ya.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ ihe na akara ngosi na anya dị ka nke a na iPhone mgbe ị na-agbalị ịgbanwe gị olu buttons, e nwere ike ịbụ ihe rapaara na headphone n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Iji dozie nsogbu a unplug na re-nkwụnye ahụ ekweisi ọtụtụ ugboro. Ị pụrụ ọbụna iji a tutpik wepụ a gbajiri mpempe headphone Jack ma ọ bụ ihe ọzọ rapaara na n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Ọzọ nnọọ mfe n'ụzọ ga-esi nke headphone mode bụ iji tọgharịa iPhone. Pịa Ụra bọtịnụ na Home Button ọnụ ruo mgbe ị na-ahụ Apple Logo.
4. Mgbe ị na-adịghị ọ bụla ụda ọbụna na ngwa
Mgbe ụfọdụ, ị mkpa a ọzọ kpam kpam na-adịgide adịgide ngwọta nke dịghị ụda nke na ekwentị gị. Iweghachi gị iPhone on iTunes na-arụ ọrụ maka a ọtụtụ ndị mmadụ. A bụ otú ime ya.
Ozugbo ị jikọọ na iTunes, pịa weghachi. A bụ ihe jupụtara nrụpụta nke ngwaọrụ gị otú anyị kwesịrị eleghị anya banyere na ị na-aga ida niile nke gị data gụnyere foto, music na kọntaktị. Ya mere, ọ na-akwụ ọ bụrụ na ị ndabere gị data tupu ị na-eme nke a. Ọ bụkwa a ukwuu irè ụzọ idozi ọ bụla glitches ekwentị gị nwere ike gụnyere mfịna ụda.
5. Mgbe Sound kpamkpam mgbe ị wepụ iPhone si a n'ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ wepu ekweisi
Mgbe ụfọdụ gị iPhone nwere ike ida uda ozugbo mgbe ị un-n'ọdụ ụgbọ mmiri ya ma ọ bụ wepụ ekweisi si audio Jack. Na nke a, nsogbu nwere ike ịbụ kpamkpam ngwaike metụtara. Ọ nwere ike mere site a ejighi waya na Njikọta dapụtara na ọ dịghị ụda. E nwere ọtụtụ ihe i nwere ike ime idozi nsogbu a. Gbalịa mee ihe ndị na-esonụ ruo mgbe ihe na-arụ ọrụ.
• Re-n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị iPhone wee wepụ ya. Nke a nwere ike na-arụ ọrụ karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ nanị obere software glitch na ekwentị gị ụdị dị nnọọ kwesịrị a ghota-m.
• Mee otu ihe ahụ na ekweisi. Re-plọg na mgbe ahụ ịkwụpụ ọzọ. Na ekweisi unplugged ibelata ma ọ bụ dịkwuo olu na-ahụ ihe na-eme.
• Mgbe ụfọdụ ájá nwere ike interfering gị ụda. Ya mere, na-ajụ ájá si n'ọdụ ụgbọ mmiri njikọ na-ahụ ma na nke a na-arụ ọrụ. Ájá a mara duhie software iche gị iPhone ka na kwụsịrị n'ọdụ ụgbọ mmiri.
• Ọ bụrụ na ihe niile ọzọ ada ada, na-agbalị resetting ekwentị na an-kpọ ntọala site na iji ndị na-esonụ.
Gaa na Ntọala, Pịa na General na mgbe ahụ Tọgharia. Na nke pụrụ ịkpata window, Pịa na ihichapu niile ọdịnaya na ntọala. A red ịdọ aka ná ntị igbe ga-apụta e dere "ihichapu iPhone." Enweta na a
Ihe niile na ekwentị gị ga-ehichapu otú ijide n'aka na-eme nke a nanị ma ọ bụrụ na i kere a ndabere gị niile ọdịnaya. Ma ọtụtụ ihe gị iPhone ga-aghọ azụ ụlọ ọrụ ntọala gị na ụda mbipụta a ga-ofu.
Ihe mkpa ka ị mara banyere Imelite ka iOS 9
Otú nyefee Pictures si iPhone ka Flash Drive
iPhone Kaadị ebe nchekwa Iweghachite: Naghachi Data si iPhone Internal Kaadị ebe nchekwa
> Resource> iPhone> Common iPhone Mpịakọta Nsogbu na Olee idozi ha